Ny fampiharana DJ dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana DJ tsara indrindra ho an'ny Android
Mpampiasa maro no manana DJ ao anatiny, na te hanao fanazaran-tena fotsiny izy ireo mba hahafahan'izy ireo miaina ny zavatra tsapan'ny olona. Soa ihany fa manana maro isika fampiharana azo alaina ho an'ny Android izay manome antsika an'ity traikefa ity. Noho ireo rindranasa ireo dia afaka ny ho tonga DJ amin'ny fampiasana finday na takelaka fotsiny isika. Afaka mitendry ny mozikantsika manokana isika amin'izany.
Ny lisitry ny fampiharana an'io karazana io dia be dia be. Saingy, nanao a fifantenana miaraka amin'ny tsara indrindra mety ho hitantsika amin'izao fotoana izao. Ka raha te ho lasa DJ ianao amin'ireto daty manokana ireto dia azonao atao amin'ny fampiharana ireo ho an'ny Android. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
Ampy amin'ny mandehandeha mamaky ny Play Store hahitanao fa maro ny fampiharana an'io karazana io mitovy amin'izany. Zavatra iray izay manasarotra ny asan'ny fitadiavana izay mety amintsika. Noho izany dia manatanteraka an'ity fifantenana rindranasa ity izahay.
About the fampiharana malaza sy malaza indrindra amin'ity karazana ity ho an'ny Android. Efa mihoatra ny 10 tapitrisa ny fampidinana azy, noho izany dia nahazo fankatoavana avy amin'ireo mpampiasa manerantany izy io. Ny fampiharana dia misy mixer roa sosona. Anisan'izany isika effets maimaimpoana dimy, ny ambiny tsy maintsy aloantsika. Ankoatry ny fananana Automix, ekarista sy mpitam-boky. Azontsika atao mora foana ny manao ny andrana voalohany amin'ny alàlan'ity rindranasa ity.
Maimaimpoana ny fampidinana app. Na izany aza, ho an'ny asa fanampiny na effets fanampiny dia tsy maintsy aloantsika. Misy ny fividianana izay mahatratra 80 euro. Ka raha te hiaina kely ianao amin'ny maha DJ anao dia ampy ny dikanteny maimaimpoana.
Developer: MWM - Mozika maimaimpoana sy fampiharana famoronana ho an'ny Android
Es iray amin'ireo fampiharana Android DJ ambony indrindra. Ka nahavita nandresy ny mpampiasa. Amin'ity tranga ity dia manana a mixer disc indroa, na dia miavaka amin'ny interface telo-dimensional aza izy. Ho fanampin'izay, manana safidy fototra maromaro izahay hamoronana ireo fifangaroantsika manokana. Ary koa afaka manampy effets, santionany na mamorona tadivavarana isika. Ka manana safidy famoronana vitsivitsy misy.
La maimaim-poana ny fampidinana app. Ao no ahitantsika ny doka, izay azo esorina amin'ny fandoavana tokana 2,19 euro.
Another of the fampiharana malaza indrindra amin'ity karazana ity ao amin'ny Play Store. Izy io dia fampiharana izay manolotra latabatra fampifangaroana miaraka amin'ny takelaka roa. Mamela antsika ampidiro ny valin'ny feo valo amin'ny fotoana tena izy. Ho fanampin'ny fahafahana miditra amin'ny tadivavarana na ny fampiasana ny pad santionana 10 izay azo ovaina tanteraka. Ary koa manana ekipa mampitovy ary afaka manoratra ny fotoam-pivorianay ary ampio hira ao amin'ny playlist.
Izy io dia fampiharana feno tokoa izay manome antsika asa fanampiny maro. Maimaimpoana ny fampidinana ny rindranasa Android. Ao anatiny dia ahitantsika fividianana fanampiny roa, na dia tsy ilaina aza izy ireo mba hankafizany ny asany rehetra.
DJ Studio 5 - Mixer maimaim-poana
Fampiharana fanta-daza ahafahantsika mamela izany mamorona fandaharana mozika ataontsika amin'ny telefaona Android na ny takelaka misy anay. Ny endri-javatra lehibe izay mahaliana azy dia izy miharo amin'ny Spotify. Azontsika atao koa ny mamorona seha-mozika amin'ny fampiasana ireo hira avy amin'ny serivisy streaming. Zavatra manome safidy maro ho antsika. Izahay koa dia manana effets, santionany ary tadivavarana marobe amin'ny fampiharana.
La misintona ny fampiharana dia mitentina 2,99 euro. Na izany aza, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny. Ka tsy vidiny lafo loatra izany.
Ny fampiharana farany ao amin'ny lisitra dia iray amin'ireo tranainy indrindra, satria izy no iray amin'ireo voalohany tonga amin'ny Android. Manana iray isika afangaro amin'ny lovia roa. Misongadina ny interface interface faran'izay kely indrindra. Amin'ny ankapobeny dia manana isika 16 vokany fanamafisam-peo, ankoatry ny fisian'ny tadivavarana, ny ekarista, ny fanohanana ny lisitry ny lisitry ny lisitra ary ny firaketana ny fotoam-pivoriana. Noho izany dia manolotra safidy maro samihafa ho antsika izy.
La misintona ny fampiharana dia mitentina 0,99 euro. Manana fividianana entana fanampiny izahay ao anatiny.
Cross DJ Pro - Afangaro ny mozikao
Ity iray ity dia ny safidintsika miaraka amin'ireo rindranasa DJ tsara indrindra misy androany ho an'ny Android. Antenainay fa mahaliana anao ireo rindranasa ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana DJ tsara indrindra ho an'ny Android
OnePlus dia mandefa fampiharana hanamorana ny fifindra-monina amin'ny terminal hafa mankany amin'ny OnePlus
Lisitry ny finday Xiaomi miaraka amin'ny NFC